Naqshadda Aagga Robbinsdale - Dugsiyada Aagga Robbinsdale
Dib uhabeynta ayaa ah Wada Shaqeynta Adeegga Qoyska sida ku qeexan MN Sharci Dejinta 124D.23. Dib uhabeynta Aagga Robbinsdale waxay u adeegtaa bulshada iyo qoysaska ku nool soohdimaha juqraafiyeed ee Dugsiyada Aagga Robbinsdale. Wada-hawlgalayaasha loo igmaday Wada-shaqeynta Adeegga Qoyska ee Minnesota waxaa ka mid ah:
Degmadda - Saxitaanka iyo Caafimaadka Dadweynaha
Head Start ama Hay'ada Waxqabadka Bulshada
Shaqsiyaadka iyo ururada kale ee aan loo igman waxay sidoo kale u adeegaan guddiga iskaashiga, sida waalidiinta, dhalinyarada iyo ururada bulshada ee aan macaash doonka ahayn.
Wada-shaqeynta Adeegyada Qoyska waxaa lagu soo oogay isku-darka nidaamyada iyo dakhliga, yareynta isku-darka iyo hagaajinta helitaanka adeegyada carruurta laga bilaabo dhalashada illaa 18 (ama da'da 21 ee naafada ah) iyo qoysaskooda.
Naqshadeynta ayaa dhammaan ku soo dhaweynaysa miiska guddiga. Kulamadu waa furan yihiin waxaana la qabtaa Talaadada saddexaad ee bil kasta 5:30 pm ilaa 7:30 pm Wixii macluumaad dheeraad ah, fadlan la xiriir Melodie Hanson, oo ah Agaasimaha Barnaamijka Dib-u-habeynta.
Caawinta Nalalka (HUG)
Iskuulka Caafimaadka Maskaxda Isku Xidhan
Mashruuca Daryeelka Bulshooyinka / "Robininsdale More adkeysi leh"
Dhalashada ama korsashada ilmahaagu waa dhacdo gaar ah oo farxad leh. Waxay sidoo kale noqon kartaa waqti ay ka buuxaan su'aalo iyo walaacyo ku saabsan ilmahaaga cusub, qoyskaaga iyo naftaada. Mararka qaar way fiicantahay in qof loola hadlo si uu taageero u siiyo kahor ama kadib dhalashada ilmahaaga.
HUG waxay bixisaa:
Booqashooyinka guriga (dalwaddii inta lagu gudajiray COVID-19) iyo hal-hal-mar oo leh takhasusle takhasus leh Waxbarashada Carruurnimada Hore ee Qoyska (ECFE)
Dhacdooyinka akhris-qorista kooxeed (dalwaddi inta lagu jiro COVID-19)
Macluumaadka hadda ku saabsan ilaha bulshada, waalidnimada iyo barashada maskaxda ku saleysan
Fursadaha aad kula xiriiri karto waalidiinta kale iyo qoysaska dhalaanka cusub ee bulshadaada
Xiriirinta barnaamijyada booqashada guriga ee dheeraadka ah, sida Qoysaska Caafimaadka qaba, Iskaashiga Qoyska ee Kalkaalisada iyo Ilmaha Waalidka ah +
Hadiyad "Soo dhawow Ilmo Cusub" ....... iyo wax badan! Dhammaan adiga qiimo kuguma fadhid ...... maxaa yeelay barashada hore waxay waligeed socotaa!
Booqashooyinka HUG waxaa la siiyaa qoysaska dhalmada ka hor iyo umusha illaa 36 bilood. Si aad wax dheeraad ah uga ogaato HUG, wac 763-504-4983 ama guji "Nala Xiriir / Codso Booqasho Guri" bogga caawimgg.org .
Carruurta maskaxda ka caafimaad qabtaa way ka guul badan yihiin iskuulka iyo nolosha. Caafimaadka maskaxda oo wanaagsan ayaa muhiim u ah guusha carruurta ee iskuulka iyo nolosha. Cilmi-baaristu waxay muujineysaa ardayda hela bulsho-shucuur iyo taageero caafimaad maskaxeed si ay ugu guuleystaan tacliin ahaan. Cimilada dugsiga, dhaqanka fasalka, barashada hawsha iyo dareenka ardayda ee isku xirnaanshaha iyo wanaagga dhammaantood way fiicnaadaan sidoo kale. Caafimaadka Maskaxdu maahan maqnaanshaha cudurka dhimirka laakiin sidoo kale wuxuu kakooban yahay bulshada, shucuurta iyo caafimaadka habdhaqanka iyo awooda laqabsiga caqabadaha nolosha.
Qiyaastii 20% carruurta oo dhan waxay u baahan yihiin adeegyo caafimaad dhimir in yar inta lagu jiro carruurnimadooda. Nasiib darrose, carruur aad u tiro badan iyo dhallinyarro leh dhibaatooyin caafimaad maskaxeed ma helayaan caawimaaddii ay u baahnaayeen oo, markii laga tago aan la daboolin, dhibaatooyinka caafimaadka maskaxda waxay ku xiran yihiin natiijooyin qaali ah oo qaali ah sida dhibaatooyinka tacliimeed iyo habdhaqan, ka tagid iyo dembiile. Gaadiidka iyo helitaanka adeegyada kadib maalinta iskuulka marar badan ayaa caqabad weyn ku ah helitaanka adeegyada caafimaadka maskaxda.
Iyada oo loo marayo maalgelinta deeqaha dibedda iyo Dib-u-habeynta maalgelinta iskaashiga, Dugsiyada Deegaanka Robbinsdale waxay qandaraas la siisay bixiyeyaasha caafimaadka dhimirka ee u adeegaya ardayda dhigata dugsiga ku dhex yaal Dugsiyada Deegaanka Robbinsdale.
Si aad ugu gudbiso ilmahaaga caafimaadka maskaxda ee dugsiga ku saleysan, waxaad:
La xiriir shaqaalaha bulshada ee iskuulkaaga
Ka wac Dadka ku Dhex-jira Soo-Dhex-galka Bartamaha 651-774-0011
Ama wac Bruce Cross, Kormeeraha, Daryeelka Iskuulka Ku saleysan ee Iskuulka ee 612-802-8618
Dib-u-habeynta ayaa la siiyaa Abaalmarinta Pinwheels ee Abaalmarinta Ka Hortagga - Abriil waa bisha Ka Hortagga Xadgudubka Carruurta.
FamilyWise waxay u aqoonsan tahay Dib-u-habeynta dadaallada hal-abuurnimo iyo iskaashi ee looga hortagayo xadgudubka iyo dayaca carruurta in kasta oo ay si joogto ah uga shaqeyneyso abuuritaanka bey'ad ammaan ah, caafimaad leh oo taageero u leh carruurta iyo qoysaska. Naqshadeynta ayaa sameysay wada-hadallo fool-ka-fool ah oo bulshada ah si loo ogaado baahida bulshada iyo in laga caawiyo horumarinta qorshaha u-adkeysiga bulshada. Qeyb ka mid ah qorshahaa wuxuu ahaa in la baro bulshada ku xeeran neuroepigenetics, ACEs iyo adkeysi.
1,451 shaqaale iyo xubno bulshada ka mid ah oo loo tababaray Khibradaha Caruurnimada ee Xun ee Sayniska
Waa maxay ACEs?
ACEs waa jahwareer carruurnimo oo weyn oo keeni kara isbeddel ku yimaada horumarka maskaxda. La qabsiga maskaxdaani wuxuu saameyn ku yeelan karaa awooda barashada iyo xirfadaha bulshada, waxayna ka dhalan kartaa dhibaatooyin caafimaad oo muddo dheer ah.
U Guuritaanka Beyond ACEs
ACEs ma go'aamiyaan koorso nololeed. Waxyaabaha gacan ka geysta adkeysiga iyo bogsashada waxaa ka mid ah:
Xannaanaynta iyo taageerada cilaaqaadka
Awoodda lagu maareeyo dareenka adag; xirfada wada xiriirka iyo xalinta dhibaatooyinka
Horumarinta sheeko isku dhafan oo macno u leh safarka nolosha qofka
Ku Dhaqanka Xaaladaha Murugada Leh
Muraayad dhaawac ah oo la wargaliyay ayaa fikirkayaga ku saabsan dabeecadda ka beddelaysa, "maxaa kaa qaldan?" in, "Maxaa kugu dhacay?" Weydiinta naftaada iyo kuwa kale ee awood siinaya su'aalaha waa hab waxtar leh oo lagu bilaabi karo wax ka qabashada dhibaatooyinka bulshada dhexdeeda ah. Waxyaabaha qaarkood ee la tixgelinayo:
Maxaad ka go'an tahay
Maxaa ku hortaagan?
Ayaa kaa caawin kara taas?
Saameyn noocee ah ayaad rabtaa inaad yeelato?